Geo-Engineering & TwinGeo Magazine - Daabacaadda Labaad - Geofumadas
Waxaan ku noolayn daqiiqad xiiso leh oo isbeddel digital ah. Anshax kasta, isbeddelada waxay uga sii gudbayaan ka tagista fudud ee warqadda una fududeynaya geeddi-socodka raadinta waxtarka iyo natiijooyinka wanaagsan. Qeybta dhismaha waa tusaale xiiso leh oo, oo ay keeneen dhiirigelin mustaqbalka dhow sida Internetka Waxyaabaha iyo magaalooyinka dhijitaalka ah, waxay qarka u saaran yihiin inay dib isu soo nooleeyaan maaddaama jidka BIM uu u oggolaanayo.
Jaangoynta BIM ee ku aaddan heerka 3 waxay aad u buuxineysaa fikradda mataanaha dijitaalka ah, in aysan ku adkaan shirkadaha sida Microsoft inay helaan boos faa'iido leh oo suuq horay ugu muuqday injineerada iyo naqshadayaasha. Xaaladdayda, waxaan ka dhashay jiil arkay CAD inay xal u tahay sawirka caadiga ah iyo inay igu adkaatay inaan qaato 3D-da maxaa yeelay markii hore gacmahayga sawirradaydu waxay u muuqdeen kuwo ka soo jiidasho badan ereyo daal badan. Iyo inkasta oo aan aaminsanahay in waxa aan hadda ku sameyno Robot-dhismeedka, AecoSIM ama Synchro ay yihiin kuwa ugu fiican, dib u milicsiga 25 sano ka hor wax aan ka badneyn oo aan ka dhaadhicinno inaan isla jaan-qaadka u nahay maareynta macnaha guud ee isku-dhafan.
... Qaabka Injineerka.
Hada hada Mabaadi'da Gemini waxay umuuqataa inay wado kale kadhigayso habka heerarka matoorida BIM, dib u soo nooleynta fikrad duug ah oo la dhaho Digital Twins oo ay shirkadaha waaween ee warshadaha u weecdeen kacdoonkii afaraad ee warshadaha; iyo ujeedada ah in la sii wado mawduuca isbeddelka ee injineernimada cilmiga dhulka, oo ah sheeko guud waxaan go aansanay BIM fikradeeda iyo muhiimadeeda.
Waxaan ku dhameystireynaa daabacaadda tusaalooyin ku saabsan hal-abuurnimo ku saabsan muuqaalka Geo-injineernimada ee softiweerka iyo adeeg bixiyeyaasha. Daraasadaha kiisaska soo socda iyo qodobbada ayaa taagan:
Maareynta xarumaha sirdoonka, barta sayniska ee Hong Kong oo adeegsaneysa fikradda Digital Twins Digital.
Baadhitaan madaxbannaan oo lagu sameeyo jidadka iyo kaabayaasha toosan ee la adeegsanayo 'Drone Harmony'.
Christine Byrn waxay nooga sheekeyneysaa Magaalada Magaalada Tijabaad ahaan Tiro-koob leh marka la eego macluumaad la isku halleyn karo goorta iyo meesha loo baahan yahay.
LandViewer, oo ay la socoto howlaheeda raadinta isbedelada biraawsarka.
Sida wareysiyada, joornaalka waxaa ku jira is-dhexgal lala yeesho hal abuurka Synchro, UAVOS iyo kii ugu horreeyay ee José Luis del Moral oo uu la socdo mashruucan 'Prometheus' ee sirdoonka aan dabiiciga aheyn ee lagu dabaqay qaab dhismeedka sharciga.
... qaab GEO.
Dhinaca kale, markaad aragto inuu ka baxayo qorshihiisa sahaminta caadiga ah, oo uu ka fekerayo wax ka qabashada caqabadda isku xidhka istaandarka LADM ee InfraXML waa in ka badan oo lagu qanco. Jaangoynta ayaa aakhirkii dhex gashay iyada oo ah silsilad guud oo udhaxeysa waaxda gaarka loo leeyahay iyo isha furan, qaar waxay yihiin geesiyaal, qaarna iscasilaad ay wax ku dhici doonaan iyaga ama la'aantood. Ugudambeyn faa iidadu waa khibradaha guuleysta; Sidaa darteed, berrinka geospatial iyo sii wadista khadka 'Cadastre', waxaan ku soo darnay kiis guul u ah maamulka dhulka.
Intaa waxaa sii dheer, joornaalka lagu kobciyay fiidiyowyo isku dhafan iyo xiriirinno is-dhexgal ah, waxaa ku jira warar ka imanaya Airbus (COD3D), Esri iyada oo la kaashaneysa Mobileye, Hexagon (Luciad 2019 iyo M.App) iyo Trimble oo leh adeegyadeeda Soosaarka.
Annagoo ilaalinayna ballanqaadkeenna ah inaan ku siino sheekooyin xiise leh oo ku jira qaybaha farsamada ee “Geo-Injineer, waxaan ku faraxsanahay inaan kuu soo bandhigno daabacaadda labaad ee majaladda Geo-Injineerka ee Isbaanishka iyo TwinGeo ee ku hadlidda Ingiriisiga.
Akhri TwinGeo - oo Ingiriis ah
Akhri Geo-Injineer - Isbaanish
Post Previous" Hore Sannad kale, taariikh kale, waayo-aragnimo kale oo aan caadi ahayn… Taasi waxay ii ahayd YII2019!
Post Next 15aad International gvSIG Shirka - maalinta 1Next »